Maka umblọ Ọrụ umbmepụta ,lọ Ọrụ, Ndị Na - eweta - China Maka Ndị Na - emepụta Plọ Ọrụ
Galvanized Pipe hanga eriri
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị galvanized anwụrụ hanga straps natara a ukwuu nke ewu ewu gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Na ha bụ ọla kọpa plated na nwetụ 1/4 ″ na 3/16 ″ oghere rụrụ.
UPC Plastic 180 Celsius Nkwusioru
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic 180 Celsius nkwusiochi clamps na-UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ọgịrịga ha na-ekwe ka ọkpọkọ na-efegharị nwayọ ma nwayọ nwayọ mgbe ọkpọkọ ahụ na-abawanye ma na-agbatị.
Kpaliri Pipe hanger Strap Wave-Shaped
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị galvanized anwụrụ hanga straps-efegharị efegharị enwetawo a ukwuu nke ewu ewu na gburugburu ụwa, karịsịa na North America. Na ha zinc plated na 3/16 ″ oghere structurally.
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic tube clamps bụ UPC mma. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, ọgịrịga ha na-ekwe ka ọkpọkọ na-efegharị nwayọ ma nwayọ nwayọ mgbe ọkpọkọ ahụ na-abawanye ma na-agbatị.
Plastic Pipe hanga eriri
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị plastic anwụrụ hanga straps e mere na ngwa ngwa na ọnụ ụzọ kpọgidere anwụrụ si joists ma ọ bụ ntụhie. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America. Ọzọkwa, a na-eji polyethylene eme ha.
Milford Hanger ji mee ihe iji kpọpu ọla kọpa site na ihe
Dịka otu n'ime ndị egwuregwu kachasị asọmpi nke ụlọ ọrụ, a na-eji ihe mgbochi Milford anyị kwụnye ọkpọkọ ọla kọpa na ihe. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America.
Kemeghi Suspension mgbodo
Dị ka otu n'ime ndị kasị asọmpi hangers nke ụlọ ọrụ, anyị kemeghi nkwusioru brackets e mere na abụọ-mpempe imewe Adjusts a nso nke soldering. Ha enwetakwala nnukwu ewu ewu n’ụwa niile, tụmadị na North America.